ဝမ်းနည်းတယ် – Yawthama
မမေ့နိူင်သေးတဲ့ခံစားချက်တွေတော့ရှိတယ် နာကျည်းမုန်းတီးလို့မနေပါဘူး မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ မဆုံချင်တော့ဘူ့း့
11/02/2018 Yawthama0Comments
မဆုံချင်တော့ဘူး ★ ★ ★ ★ ★ ★ ဆန္ဒတွေတော့ရှိတယ် မတောင်းဆိုတော့ဘူး ဂရုစိုက်မှုတွေတော့လိုချင်ခဲ့တယ် မပြောပြတော့ဘူး နီးသည်ဖြစ်စေ ဝေးသည်ဖြစ်စေ မဆုံချင်တော့ဘူ့း့ တကယ်ချစ်ခဲ့တာတော့ဝန်ခံတယ် မလိုအပ်တော့ဘူး ပေးဆပ်ခဲ့သမျှတွေတော့သိစေချင်တယ် နစ်နာခဲ့တယ်လို့မသတ်မှတ်ဘူး သိသည်ဖြစ်စေ
Life Style ၀မ်းနည်းတယ်
သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာ စခန်းကုန်းပေါ်ကို နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ မမှိတ်မသုန်နဲ့ ကြည့်နေခဲ့ပုံပဲ ။(စ်ိတ်ခိုင်မှ ဖတ်ပါ)
25/01/2018 Yawthama0Comments
တစ်နေ့က … ကိုယ်တို့ စခန်းက ခွေးတစ်ကောင်ပျောက်သွားတယ် ။ ရဲဘော်တွေကို မေးကြည့်တော့ … အောက်ကိုဆင်းသွားတာ တွေ့လိုက်တယ် ဆိုတာက လွဲလို့ ကျန်တဲ့အဖြေအတိအကျ ဘာမှမသိခဲ့ရဘူး ။ အဲလိုနဲ့ အဲခွေးလေး … တစ်ပါတ်လောက်
သံသယတွေ မင်းမူလာတဲ့အခါ မောင်နှလုံးသားလည်း အေးစိမ့်တတ်လာပြီးဆိုတာ ကျွန်မမြင်တတ်ခဲ့ဖို့ကောင်းပါတယ်…
24/01/2018 Yawthama0Comments
သံသယတွေ မင်းမူလာတဲ့အခါ မောင်နှလုံးသားလည်း အေးစိမ့်တတ်လာပြီးဆိုတာ ကျွန်မမြင်တတ်ခဲ့ဖို့ကောင်းပါတယ်… Good Bye ” ဆိုတဲ့ လက်ပြ နှုတ်ဆက်စကားလုံးရဲ့အဆုံးမှာ မောင်လက်တွေကို ဖြုတ်ချဖို့ အချိန်တန်ပြီးဆိုတာ ကျွန်မကြိုသိခဲ့ဖို့ကောင်းပါတယ်… အချစ်တစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အလွမ်းတွေနဲ့ ပြည့်ကြပ်မွန်းသိပ် နာကျင်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့
ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူ​တွေ သက်​ကြီးရွယ်​အို​တွေဆီမှာ ​ဈေးဝယ်​ရင်​​ဈေးမဆစ်​ပါနဲ့လား
20/01/2018 Yawthama0Comments
ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူ​တွေ သက်​ကြီးရွယ်​အို​တွေဆီမှာ ​ဈေးဝယ်​ရင်​​ဈေးမဆစ်​ပါနဲ့လားသူငယ်​ချင်းရယ်​ သူတို့ဟာအမြတ်​အစွန်းထက်​သူတို့ရဲ့ဝမ်း​ရေးအတွက်​ ​ဈေး​ရောင်းရတဲ့သူ​တွေဖြစ်​လို့ပါကွယ်​
ကျီထဲက စပါးတွေ ကုန်ပြီလား…သခင် ထမင်းအိုး ခြစ်နေတဲ့ အသံတွေက ငါ့မျက်ရည် ကို ချူနေသလိုလို…ပဲ
14/01/2018 Yawthama0Comments
ငါ တကယ် မသယ်နိုင်တော့လို့ပါ…… ငါ့ကျောပေါ် ထန်းရွက်ခြောက်တွေတင်ပြီး မီးမရှို့ကြပါနဲ့ ငါ အရမ်းနာတယ် သိပ်နာတတ်တယ်သခင် မင်းတို့ရဲ့သား ဆိုင်ကယ်စီးဖို့ငါ့အသားကို အလှီး ခံခဲ့တယ် … မင်း ခြေဖဝါးကဆူး…မင်း…ထွင် ပြီး ထုတ်နေချိန်
နောက်ဆုံးကျည်တစ်တောင့်ကို ဘာကြောင့်ချန်မထားမိခဲ့တာလဲ ညီရယ်
13/01/2018 Yawthama0Comments
နောက်ဆုံးကျည်တစ်တောင့်ကို ဘာကြောင့်ချန်မထားမိခဲ့တာလဲ ညီရယ် ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
မမျှတ တဲ့ လောက
11/01/2018 Yawthama0Comments
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့မကြည့်နိုင်မမြင်နိုင်သ၍ …. အတ္တတွေရှေ့တန်းတင်နေသ၍… တရားမျှတမှုဆိုတာ ရှိမလာနိုင်ဘူးဆိုတာ…. သံပါးစပ် မမျှတ တဲ့ လောက ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ သိန်း ၄၀ တန် မီးပုံးပျံကြီး တက်သွားတဲ့အခါ ၄၀၀ တန် ထမင်းထုပ်လေး စားနေတဲ့ ကလေးလေးက
10/01/2018 Yawthama0Comments
ပညာရှာရင်းအသက်​ကို​ပေးဆပ်​လိုက်​ရတဲ့က​လေးငယ်​​တွေ သူတို့​ဒေသတိုးတက်​ဖို့​ကောင်းစားဖို့ ငါပညာတတ်​မှရမယ်​ ငါကြိုးစားပြီး​တော့ပညာရှာရမယ်​ဆိုတဲ့အသိ​တွေနဲ့ ​လှေနဲ့တမျိုး ​ခြေကျင်​တဖုံ ​ဝေးလံရာ​နေရာ​ဒေသ​တွေမှာပညာရှာမှီးကြရတယ်​ ဘဝကကြမ်းတမ်းသလို ဝမ်း​ရေးကလည်းခက်​ ပညာ​ရေးဟာလည်းပဲသူတို့အတွက်​အားမလိုအားမရဖြစ်​လို့ ဒါကိုတာဝန်​ရှိသူ​တွေအ​နေနဲ့ သူတို့​ဒေသ​လေးအတွက်​ အနာဂတ်​ရဲ့မျိုးဆက်​သစ်​​လေး​တွေအတွက်​ ​နောက်​​နောင်​အခုလိုအဖြစ်​ဆိုးမကြုံရ​အောင်​ တံတား​လေးတစ်​စင်း ​လှေ​ကောင်း​ကောင်း​လေးတစ်​စီးဖြစ်​ဖြစ်​မစီစဉ်​​ပေးနိုင်​ကြ​တော့တာလား တချို့​နေရာ​တွေကျပြန်​​တော့လည်း တင့်​​တောင့်​တင့်​တယ်​ ​ကျောင်းကားအကြိုအပို့နဲ့ တံတား​ကောင်း​ကောင်းနဲ့
သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နဲ့ မဆန့်တဲ့ ခံစားချက်တွေ
06/01/2018 Yawthama0Comments
ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ မိန်းကလေးတွေက သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရလို့ အသဲကွဲသွားရင် ငိုတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိကြတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရရင် ရင်ထဲမှာ ငိုရတာထက်ပိုပါတယ်။ (၁) နာကျင်ရတာထက်ပိုတယ် ယောကျာ်းလေးတွေ ဖောက်ပြန်ခဲ့ကြရင် မိန်းကလေးတွေခံစားရမှာက နာကျင်ရတာလောက်ပဲသိကြတယ်။ တကယ်တော့ သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့မိန်းကလေးတွေခံစားရတာက နာကျင်ရတာထက် ပိုတယ်။
03/01/2018 Yawthama0Comments
တချို့ဟာသတွေက မရယ်ရဘူး ===================== ကလေးရေ… ၂၄ ဆိုတာ သိပ်စောပါတယ် ၄၇ ဦးတို့အရွယ်အတွက် မင်းက…. ကလေးပဲလေ မှန်တာပေ့ါ ဒီနေ့မှာ မင်းကိုနှုတ်ဆက်ရင်း မင်းကိုချစ်သူတွေ ငိုကြတယ် အဲ့နေရာနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ သခင်ယေရှုရင်ခွင်ထဲ မှေးအိပ်သွားတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက်
ဒီလိုကောင်လေးမျိုး ရလို့ကတော့ လက်မလွှတ်နဲ့တော့…
#ဘဝချိုချိုဖရဲသီးခိူခိူ ☝☝ အမေ , သားကျောင်းထွက်တော့မယ် ‘ ပြင်းထန်တယ့် လက်ဝါးတချက်
Khant Zin Aung on ပညာရေးဆိုတာ အတွင်းကျကျ သိလေ လေးစားစရာတစ်ကွက်မှ မရှိလေပဲ…လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ဖွင့်သံ
Copyright © 2018 Yawthama. All rights reserved.